6zọ Mkpọchi ụzọ isii iji E-Azụmaahịa Gị Gaa Globalwa Niile | Martech Zone
Mgbanwe nke ire ere omnichan pụtara nke ọma, na-akwado ya n'oge na-adịbeghị anya Nike na-aga ire na Amazon na Instagram. Agbanyeghị, ịgbanwee gaa na azụmahịa ọwa-adịghị mfe. Ndị ahịa na ndị na-ere ahịa na-agba mbọ idobe ozi ngwaahịa na-agbanwe agbanwe ma zie ezi n'ofe nyiwe niile - nke mere na 78% nke ndị ahịa enweghị ike ijide ngwa ahịa ndị ahịa ka achọ nghọta.
45% nke ndị ahịa na ndị na-ebubata ya efunahụla $ 1 + mil na ego ha nwetara n'ihi nsogbu ndị chere ihu mgbe ị na-etinye ikike ikike mgbasa ozi n'ime usoro azụmahịa ha.
1WorldSync, a na-eduga na-eweta nke ngwaahịa ọdịnaya ngwọta, na nso nso a wepụtara infographic n'okpuru dabere na Tingdebanye usoro maka Azụmaahịa Global ọmụmụ.
Okporo ụzọ na-ejikarị E-Azụmaahịa aga Global
Ihe omuma ihe omuma a na-eme ka nsogbu ndi mmadu na ndi ahia na ndi n'enye ahia, ya na ndi isi ahia na-emeri uzo ndi ahu site na usoro ihe omuma nke igwe ojii.
Njikọta - sistemụ ihe ọmụma ngwaahịa dị ugbu a enyeghị otu ikpo okwu iji melite ma gbanwee ọdịnaya ngwaahịa dị mma na ndị mmekọ azụmaahịa.
Exchange - sistemụ ihe ọmụma ngwaahịa dị ugbu a anaghị agbaso ụkpụrụ nke ndị ahịa ha.
nnabata - ndị na - eweta ngwaahịa na-agbasi mbọ ike ijide ụkpụrụ ụkpụrụ dị iche iche na mba niile.
Quality - ndị ahịa enweghị ike ịnye nkọwa na eserese ngwaahịa na-esite n'aka ndị mmekọ soplaya.
omnichannel - ndị ahịa na-agba mbọ ịchịkọta na kesaa ozi zuru oke, na-agbanwe agbanwe, ma tụkwasịrị obi na ngwaahịa niile.
Nghọta - ndị ahịa enweghị ike ijide ngwa ahịa ndị ahịa achọpụtara maka nghọta ngwaahịa.
Tags: 1worldsyncamazonnsogbuusoro ihe omuma nke igwe ojiinnabataazụmahịa zuru ụwa ọnụihe ịma aka azụmahịa ụwankwenye zuru ụwa ọnụnjikọ ụwaazụmahịa e-commerce zuru ụwa ọnụnsogbu ecommerce zuru ụwa ọnụmgbanwe zuru ụwa ọnụomnichannel zuru ụwa ọnụnghọta zuru ụwa ọnụinstagramazụmahịa instagramnikesistemụ ihe ọmụma banyere ngwaahịa
Aug 30, 2017 na 12:43 PM
N'ọchịchọ anyị ịgbakwunye na mbupụ mbupu ngwaahịa si China, ọ dị ka enwere otu ihe na-agbanwe agbanwe, ọ yikwara ka ị pịa ntu ahụ n'isi. Ọ bụ nkwurịta okwu na ntụkwasị obi ochie. Otu, ị ghaghị ijide n'aka na gị (na onye na-ere gị) na-asụ otu asụsụ ma n'ụzọ nkịtị ma n'ụzọ ihe atụ.
Anyị enweela ihu ọma, m na-ekwukwa nke a na ire HUMONGOUS na agba, na US ka anyị wee hapụ usoro metric dịka ụzọ anyị si atụ ma tụọ ihe.
Na mgbakwunye, enwere okwu ego. Ego na-agbanwe ngwa ngwa, ihe nwere ike bụrụ nnukwu nkwekọrịta ọ bụla nwere ike gbanwee ngwa ngwa ọ bụghị nke ukwuu. N'ime ụgbọ mmiri na-adaba adaba, ọ ga-aga n'ekwughi na ị nwere olile anya ma kpee ekpere ka onye na-ebu gị zipụ arịrịọ ahụ ka ha zere ịhapụ onye zụrụ ahịa ka ị kwụọ ụgwọ naanị .75 maka ụmụ nnụnnụ ahụ, ebe ha ka ga-eme kwụrụ gị ụgwọ 9. A siri ike bit nke nkwurịta okwu n'ezie.
Ihe a nile na-abata n'ezi nkwurita okwu. Olileanya dị ka iji ụdị SaaS ndị yiri ya, ikike nke nkwurịta okwu ga-adị mfe karị.
Ugbu a, mgbe na-ede ihe niile nke ahụ, m kwesịrị just just, “Ditto”. 😉